Armenia dia manolo-tena hanamora ny sidina eo anelanelan'i Russia sy Georgia aorian'ny fandraràn'i Putin ny dia an-habakabaka mivantana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Armenia dia manolo-tena hanamora ny sidina eo anelanelan'i Russia sy Georgia aorian'ny fandraràn'i Putin ny dia an-habakabaka mivantana
Nilaza ny praiminisitra Armeniana fa vonona ny ho lasa faritra buffer eo anelanelan'i Georgia sy Russia ny firenena mba hanomezana rohin'ny rivotra. Mba hanatanterahana izany, manomboka ny 8 Jolay, ny orinasam-pitondrana Armeniana dia afaka manokana fiaramanidina mpandeha dimy na mihoatra ho an'ny fitaterana an'habakabaka.
Seranam-piaramanidina Armeniana telo no efa naneho ny fahavononany hanome fifandraisana an-habakabaka eo amin'i Russia sy Georgia: Atlantis European, Taron Avia ary Armenia. Raha ny fanazavan'ny praiminisitra dia azo ampitomboina ho fito ny isan'ny fiaramanidina raha ilaina izany.
Ny filoha rosiana Vladimir Putin dia nandrara ireo kaompaniam-pitaterana rosiana tsy hitaterana teratany rosiana hankany Georgia ny 8 jolay lasa teo. Voarara ihany koa ny seranam-piaramanidina Zeorziana tsy afaka manidina mankany Rosia.
Seychelles dia nandray anjara tamin'ny Session 110th an'ny UNWTO Executive Council
Fanafihana fampihorohoroana an'habakabaka mahafaty tao amin'ny seranam-piaramanidina Abha ny alahady
23 minitra lasa izay